Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): September 2010
တချိန်၌ အလွန်ရင်းနှီးကြသည့် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိရာ တစ်ယောက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီး ကျန်တစ်ယောက်မှာ ခရာဇ်ယန်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်၏။ သူတို့ နှစ်ယောက်မှာ ကိုယ့်ဘာသာတရားကို အတော်ကိုင်းရှိုင်းကြသူများ ဖြစ်ကြ၏။
China’s Burma Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics
A Burmese Perspective | September 24, 2010 | Friday
Burma s 2010 elections present challenges and opportunities for China’s relationship with its south-western neighbors. Despite widespread international opinion that elections will be neither free nor fair, China is likely to accept any poll result that does not involve major instability. Beijing was caught off-guard by the Myanmar military offensive into Kokang in August 2009 that sent more than 30,000 refugees into Yunnan province.
By Kanbawza Win | 23 September, 2010 | Thursday
It has been proven beyond doubt by renowned academics that the word “Myanmar” ending with “r” is both phonetically and politically wrong, and also for the simple reason that dictators cannot change the fair name of the country without the consent of the people. Besides the word “Myanma” comes from the South Indian word of “Mrama”,atribe in India, who migrated into Burma thousands of years ago and call themselves as “Myanmah” ending with an “h” later became “Myanma” where the last letter| “a” is pronounced softly, as the word mother in English. But as far English language is concerned the Burmese generals being bumpkin make the wrong spelling adding the consonant “r”’ and construe that everybody within its grab or do business with them, must comply.
PNLO ၏ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိန်းအမှတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
PNLO Statement on International Day of Peace
ပအိုဝ်းပါတီဝင်များကို ကြံဖွံ့ပါတီ ထံ ရောင်းချ၊ ဒေသခံ မကျေနပ်မှု ဖြစ်
သတင်းနှင့် မီဒီယာ ကွန်ယက်။ ခွန်အောင်မြတ်။ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် ပါတီဝင် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပအိုဝ်းအမျိုးသား အဖွဲ့ ချုပ် (PNO) ပါတီ ထံတွင် ၀ယ်ယူရာ ပအိုဝ်းလူမျိုး အများစုက မကျေ မနပ်ဖြစ်နေသည်ဟု ယင်းအဖွဲ့များနှင့် နီး စပ်သူက ပြောသည်။
တစ်နေ့သောအခါဝယ် ရွာတစ်ရွာတွင် သားကောင်များကို နေ့တိုင်းလိုက်ပစ်သည့် တောလိုက် အလွန်ကျွမ်းကျင်သည့် မုဆိုးကြီး တစ်ယောက်ရှိ၏။
ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပရန် ကန့်သတ်နယ်မြေများတွင် ကရင်ပြည်နယ်အများဆုံး
စက်တင်ဘာလ ၁၇ရက်။ နန်းထူးစံ (ကေအိုင်စီ)
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ မွန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ နယ်မြေအချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်း ပခြင်းမပြုရန် ယမန်နေ့က တရားဝင် စာရင်းများ ထုတ်ပြန်လိုက်ရာ ကရင်ပြည်နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၁၅၅ဖြင့် အများဆုံး ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
By SAW YAN NAING and LAWI WENG | September 17, 2010 | Friday
The Election Commisssion's (EC) cancellation of polling in some 300 villages in ethnic areas announced on Thursday is due to poor security and lack of support from ethnic people, ethnic observers suggest.
လူမျိုးအမှန် ဖော်ပြခွင့် မရလို့ တိုင်းရင်းသားပါတီ အခက်ကြုံ
By နိုင်ကွန်းအိန် | ဗွီအိုအေ | ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀ | ကြာသပတေးနေ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေအတွက် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားတွေ ပြုလုပ်တဲ့ နေရာမှာ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနတွေကနေ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အဖြစ် မဖော်ပြဘဲ မြန်မာလူမျိုးအဖြစ်သာ ရေးသွင်းခြင်း ခံနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ အခုကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ အနေနဲ့ လူမျိုးစု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာရဖို့ အခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်း တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ပါတီရန်ပုံငွေအတွက် လူထုထံကောက်ယူ
သျှမ်းသံတော်ဆင့် | စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၀ | သောကျာနေ့
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်သည် ပါတီရန်ပုံငွေအတွက် လူထုထံ တအိမ်ထောင် ကျပ်ထောင်ချီ ဆင့်ဆိုကောက်ခံနေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
တက်လူ / NEJ / ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ အင်းလေးကန် တိမ်ကောလာသည်ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော ငွေကြေးများအနက်မှ ဒေါ်လာ (၅) သန်းကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်အမျိုးသမီးတဦးက တနှစ်လျှင် (၁) သန်းစီ လှူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သစ်တောသယံဇာတ ပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း (ဖရီဒါ) မှ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအုန်းက ပြောကြားသည်။
တိုင်းရင်းသား ဒေသများတွင် ပဲခူးလူသတ်မှုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များ အမြဲလိုပင် ဖြစ်
ဧရာဝတီ | Thursday, September 16, 2010
ပဲခူးမြို့တွင် စစ်တပ်က လူငယ် ၂ ဦးကို ပစ်သတ်လိုက်မှုကြောင့် ဝေဖန်မှု များစွာထွက်ပေါ်လာသော်လည်း ထိုကဲ့သို့ အနိုင် ကျင့် သတ်ဖြတ်မှုများသည် အစွန်အဖျား တိုင်းရင်းသား နယ်မြေများ၌ အမြဲလိုပင် ဖြစ်ပျက်နေသော ရာဇဝတ်မှုများဖြစ်ကြောင်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ထောက်ပြသည်။
By Khaing Suu | 15 September 2010 | Wednesday
New Delhi (Mizzima) – The Karen National Union announced today it will observeaone-day unilateral ceasefire on September 21 to mark UN International Day of Peace, but reserve the right to defend itself, the KNU deputy chairman said.
By နောင်ခမ်းခါ | တောင်ကြီးတိုင်းမ် | စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၀ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့
စနေနေ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်သဖြင့် မျက်နှာသစ် သွားတိုက်ပြီး၊ နံနက်ဆောင်းလေညင်းလေး ရှူရှိုက် ခံစားရန်နှင့် နံနက်ခင်းရဲ့ အေးမြတဲ့ရာသီဥတုကို ခံစားရန် အိပ်ယာမှ စောစောထဖြစ်ခဲ့သည်။ စောစောဆိုသော်လည်းပဲ (၇) နာရီချိန်ခန့် ရှိပြီဖြစ်၏။ နံနက်ခင်း အေးချမ်းလှသဖြင့် အိပ်ယာမှထပြီး နွေးထွေးတဲ့ အိမ်ရှေ့ နေရောင်ခြည် ဖြာကျသည့် နေရာတွင် ရေနွေးကြမ်းခွက် လေးမော့၍ စာအုပ်လေးထိုင်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
By နူးပန် | VOA | ဗုဒ္ဓဟူး, 15 စက်တင်ဘာ 2010
ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ခွင့် မရခဲ့တဲ့ KSPP ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေးပါတီကနေ တသီးပုဂ္ဂလတွေအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ အမည်စာရင်း တင်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာတူးဂျာ အပါအ၀င် အားလုံးကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ငြင်းပယ်လိုက်တယ်လို့ အပယ်ခံရသူ တသီးပုဂ္ဂလ ကချင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးက အတည်ပြုပြောပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UPNO တရားဝင်ဖျက်သိမ်းခံရ
တောင်ကြီးတိုင်မ်း | စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် | အင်္ဂါနေ့
ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (Union Pa-Oh National Organization – UPNO) အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း ၁၀ ခုအား တရားဝင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ကြေညာချက်ကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရပိုင်မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် အသံလွင့်ဌာနများတွင် ကြေညာသွားကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများကို မေးမြန်းခြင်း - ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်
နန်းခမ်းကယောက် | စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် | ကျာသပတေးနေ့
၈ စက်တင်ဘာ ၂ဝ၁ဝ - နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် အစီအစဉ်ကို ဒီဗွီဘီ ရေဒီယိုက တနင်္ဂနွေနေ့ကလွဲလို့ နေ့စဉ် ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရ ဒေသတခုဖြစ်တဲ့ ပအိုဝ်းဒေသမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်စံလွင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေး မြန်းချက်ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပအိုဝ်းပါတီနှင့် လက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ဒေသခံများထံမှ အဓမ္မ ငွေကောက်ခံ
ခွန်အောင်မြတ် | NMG | စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် | သောကျာနေ့
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ဒေသခံ ကျေးရွာများထံ ငွေကြေး အတင်းအဓမ္မ ကောက်ခံနေသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
By DVB | Published:9September 2010
Footage has been released that shows the shocking aftermath ofarecent scorched earth campaign by the Burmese army in eastern Karen state.
By Kanbawza Win | September 08, 2010 | Wednesday
As according to the Burmese astrological date after Nov. 17th the Junta’s faux pas will becomeafait accompli while the civilized international community looked on with folded arms. The crux of the Burmese struggle is the inconceivable difference between Burma’s diverse ethnic nationalities, label as separatist and that of the pro-democracy forces that are unable to accept the ethnic nationalities as equals, in their obsession to overthrow the illegitimate regime. Their respective local leaders, by their actions, have chosen to live under the tyrannical regime rather than compromise their belief with their brethren. If they have been united the Junta would have been overthrown long ago, now the Jean is out of the bottle and is threatening everybody within its reach.
တစ်ချိန်တုန်းက ကျေးလက်တောရွာတစ်ရွာတွင် ရုပ်ရည်ချောမောလှပပြီး အလွန်မာနကြီးသည့် အပျိုကြီး တစ်ယောက်ရှိ၏။ ယင်းအပျိုကြီးသည် တော်တော်အရုပ်ဆိုးသည့် အပျိုပေါက်စ ညီမတစ်ယောက်ရှိ၏။
အခွန်ကြောင့် ပြည်သူလူထု ဒုက္ခရောက်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ဝေ
မြတ်ခိုင်ဦး / ၀၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀ / NEJ
“ဗိုက်မှောက်နေရသည့် ဘဝများ” ဟူသည့်အမည်ဖြင့် အစီရင်ခံစာတစောင်ကို လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ထုတ်ဝေလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခွန်ငွေကောက်ခံမှုများကြောင့် ပြည်သူလူထု ဒုက္ခပင်လယ်ဝေရကြောင်းကို စုစည်းတင်ပြထားသည့် အဓိက အခန်း (၃) ခန်းပါဝင်ကာ စာမျက်နှာ (၁၄၀) ရှိသည့် အစီရင်ခံစာကို ယနေ့နံနက်၌ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များအသင်း (FCCT) တွင် သတင်းစာရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်၍ ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Pa O National Organization PNO presents its policy...
ခရာခ်နှင့်ဗုဒ္ဓ ကိုယ့်အတွေးနှင့် ကိုယ်ချဲ့ကြပုံများ...
An Acid Test for the Myanma Ethnic Democracy Movem...